ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးရွက်လှေ | ခရီးသွားသတင်း
Mariela Carril | 03/05/2022 17:00 | ယေဘုယျ
လိုအပ်ချက်က အခုအချိန်အတန်ကြာနေပြီလို့ ပြောကြတယ်။ ရွက်လှေကြီးတွေ ၎င်းသည်ကြီးထွားလာသည်နှင့်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ရောင်းချသူများ၏အဆိုအရ၊ ၎င်းသည် 2019 ခုနှစ်မှစ၍ ကပ်ရောဂါကိုဖြစ်ပွားစေသောဘီလီယံနာများတိုးပွားလာသည်နှင့်အမျှအရာအားလုံးသည်တစ်ဟုန်ထိုးမြင့်တက်လာခဲ့သည်။ ဝမ်းနည်းစရာကမ္ဘာကြီးမှာ တစ်ချို့အလုပ်တွေ ဆုံးရှုံးခဲ့ရသလို တချို့က သန်းနဲ့ချီတဲ့ဝင်ငွေတွေ ပိုရခဲ့တယ်...
ယနေ့စျေးကွက်သည် ပို၍ကြီးမားသော ရွက်လှေများကို လိုချင်နေပြီး ၎င်းတို့ပြောသည့်အတိုင်း ဤသည်မှာ အစသာဖြစ်သည်။ အရေးအကြီးဆုံး ရွက်လှေတည်ဆောက်သူမှာ ဂျာမန်ကုမ္ပဏီ Lürssen ဖြစ်ပြီး ထိုဥရောပနိုင်ငံ မြောက်ဘက်တွင် သင်္ဘောကျင်းရှစ်ခုရှိသည်။ နောက်ဆုံးတွင် ငွေတောင်းခံလွှာတင်သူ၏ ဆန္ဒများ ပြည့်စုံကြောင်း သေချာစေရန် ဒီဇိုင်နာများ၊ ပိုင်ရှင်များနှင့် ကြော်ငြာသူများ အတူတကွ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြသည်။ ဒီနေ့၊ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကြီးဆုံး ရွက်လှေက ဓာတ်ပုံထဲမှာ မြင်ရတဲ့ Azzam ဖြစ်ပါတယ်။။ ငါတို့သိသလား
ယနေ့ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးရွက်လှေ ၂၂၅၆ မီတာရှည်တယ်2024 တွင် 183 မီတာအတိုင်းအတာရှိသောလမ်းတစ်ခုရှိသော်လည်း၊ ထို့အပြင်၊ အစောပိုင်းက ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သော ဂျာမန်ရွက်လှေတည်ဆောက်ရေးကုမ္ပဏီက ထိုသို့ပြောပါသည်။ ရွက်လှေများသည် အရှည် 200 မီတာရှိသော စူပါရွက်လှေများ မဖြစ်လာမီ အချိန်တစ်ခုသာဖြစ်သည်။. ၎င်းသည် လမ်းကြောင်းသစ်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် Azzam သည် အရှည် 180 မီတာရှိသော အကြီးဆုံးရွက်လှေဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် 2013 ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ဈေးအကြီးဆုံး ကိုယ်ပိုင်ရွက်လှေဖြစ်သည်။ မူလက ၃၅ မီတာ ပိုတိုတယ်။ Azzam ကို အင်ဂျင်နီယာ Mubarak Saad al Ahbadi ၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် Lürssen မှ တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်လာ သန်း ၆၀၀ ကုန်ကျပြီး၊ ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်သာဖြစ်ပြီး ကြီးပွားတိုးတက်သည်နှင့် ရှည်လျားသော အဆုံးတိုင်အောင် ကြီးပွားသည်။
ရွက်လှေကို 2013 ခုနှစ် ဧပြီလတွင် စင်းလုံးငှားခဲ့သည်။ ဂျာမန်ကုမ္ပဏီ Lürssen Yatchs မှ Nauta Yatchs မှ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး Christophe Leoni မှ အတွင်းခန်းဒီဇိုင်းဖြင့် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။စုစုပေါင်း သုံးနှစ်အတွင်း စံချိန်တင် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ အစောပိုင်းနှစ်တွင်၊ 2012 ခုနှစ်တွင် Azzam သည် ၎င်း၏ မူလ မီတာ 170 အရှည်ရှိ ဆည်မှ 220 မီတာ ပိုကြီးသော ရေကာတာသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ သင်္ဘောအတွက် သံမဏိစတီးလ်တွေကို ၂၀၀၉ နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာ စတင်ဖြတ်တောက်ခဲ့ပြီး 2009 ခုနှစ်မှာတော့ လုပ်ငန်းတွေက ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။
ဒီရွက်လှေ ၎င်းတွင် ဧည့်သည် ၃၆ ဦးနှင့် အနည်းဆုံး အမှုထမ်း ၅၀ ဦးနှင့် အမှုထမ်း ၈၀ ဦး အများဆုံး ထားရှိရန် နေရာ ရှိသည်။. သူ့တွင် ဂေါက်လေ့ကျင့်ရေးခန်းနှင့် Gym ပါရှိပြီး အပြင်ဘက်တွင် ကြယ်ပွင့်များရှိသည်။ ၎င်း၏အဓိကခန်းမအရှည် 29 မီတာရှိသည်။ ထောက်တိုင်များမပါဘဲ 18 မီတာရှိသော ပွင့်လင်းသောနေရာသည် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။ ဧည့်သည်များစွာအတွက် နေရာလွတ်ပေးရန် အစုံ ၅၀ ရှိတယ်။ ကုန်းပတ်တွင် အလွန်ကြီးမားသော ပွင့်လင်းသောနေရာများ မရှိပါ။
ပြင်ပလိုင်းများ၊ ပရိုဖိုင်၊ Mario Pedol မှတည်ထောင်သော Nauta Design စတူဒီယိုအဝေးမှကြည့်သောအခါ အနီးကပ်ကြည့်သောအခါထက် သေးငယ်နေပုံပေါ်သည်။ ဂရုတစိုက်ဒီဇိုင်း၏အားသာချက်များ။
သင်္ဘောပေါ်တွင် ပျံ့နှံ့နေသည့် ဓာတ်ပုံများ အရ သိရသည်။ အထပ်ခြောက်ထပ်ပါရှိသည်။ ဒီဇိုင်းလည်းရှိတယ်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုစိုက်ဖို့ နည်းပညာကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်နှင့် ဆူညံသံထုတ်လွှတ်မှု လျှော့ချခြင်းဖြင့်၊ အင်ဂျင်များမှ အပိုစွမ်းအင်ကို ရေကို သောက်သုံးရေအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန်အတွက် desalination စနစ်အတွက် အသုံးပြုသည်ဟုလည်း ခန့်မှန်းကြသည်။
ဒါပေမဲ့ Azzam သည် အနှေးသင်္ဘောမဟုတ်ပါ။အရွယ်အစားအရ (အဲဒါက ဧရာမတွေ နှေးကွေးခြင်းအကြောင်း)။ ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး၊ Azzam ဟာ အမြန်သင်္ဘောပါ။ အမြန်နှုန်း 31 knots အထိ ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ၎င်း၏ ဓာတ်ဆီတာဘိုင် နှစ်လုံးနှင့် ဒီဇယ်အင်ဂျင် နှစ်လုံးတို့ကြောင့် ဂျက်လေယာဉ် လေးစင်းအား စွမ်းအားပေးသည်။ အာဇမ် အလေးချိန် တန်ချိန် ၁၄ဝဝ ခန့်ရှိသည်။ နှင့် ၎င်း၏ ဆီတိုင်ကီသည် သိုလှောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ လောင်စာဆီလီတာတစ်သန်း. စုစုပေါင်း ကုန်ကျစရိတ်မှာ ၆၀၅ သန်းဟု ခန့်မှန်းရပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် တတိယအကြီးဆုံး ရွက်လှေထက် သန်း ၁၀၀ ခန့် သီးသန့်အသုံးပြုရန်၊ နေကြတ်ခြင်း။.
ဒါပေမယ့် ဤစူပါရွက်လှေကို တည်ဆောက်ရန် တာဝန်ပေးခဲ့သူ? ထင်ရှားသည်မှာ၊ ငွေအမြောက်အမြားရှိသော အာရပ်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ Khalifa bin Zayed Al Nahyan။ စင်းလုံးငှား ငှားလို့ ရနိုင်ပေမယ့် ယူဆချက်တစ်ခုသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ နာမည်က ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ။ ဆုံးဖြတ်ခြင်း။
UEA ဥက္ကဋ္ဌက ဒီလှေလေးကို ထိန်းသိမ်းဖို့ ဘယ်လောက်ကုန်ကျတယ်ဆိုတာ သိပ်စိတ်မဝင်စားဘူးထင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် တကယ်ကို အရမ်းစျေးကြီးပါတယ်။ ၎င်း၏ကုန်ကျစရိတ်၏ 10% သည်၎င်းအတွက်အသုံးပြုသည်ထင်သည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု နှစ်စဉ်။ အဲဒါကတော့ တချို့ပါ။ တစ်နှစ်လျှင် ဒေါ်လာ သန်း ၆၀။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကြီးဆုံး ရွက်လှေ ရှိရင် ရှိရမယ်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဒုတိယအကြီးဆုံးရွက်လှေ… မှန်ပါတယ်၊ ဒီနေ့ ကျွန်တော် တင်ပြတဲ့ ဆောင်းပါးကို ပိတ်ဖို့ပါ။ နေကြတ်စူပါရွက်လှေ. ၎င်း၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်။ Roman Abramovih သည် ရုရှားဘီလျံနာတစ်ဦးဖြစ်သည်။ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ Chelsea FC ရဲ့ တခြားအရာတွေကြားမှာ လုပ်ငန်းရှင်၊ ပိုင်ရှင်ပါ။ ၎င်း၏ဆောက်လုပ်ရေးသည်ငါးနှစ်ကြာမြင့်ပြီးဒေါ်လာ 409 သန်းကုန်ကျသောကြောင့်၎င်း၏လက်ရှိစျေးနှုန်းနှင့်အတူ အဆင့်မြှင့်တင် အဲဒီကတည်းက သန်း ၆၂၀ ရှိတယ်။
ဒီသင်္ဘောကို ထိန်းသိမ်းဖို့ တစ်နှစ်ကို ၆၅ သန်း ကုန်ကျပါတယ်။ Eclipse သည် ဒီဇယ်လျှပ်စစ်တွန်းအားရှိသော ရွက်လှေဖြစ်ပြီး ၎င်း၏အင်ဂျင်များသည် Azipod ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းသည် အင်္ဂလိပ်အိမ်တော် Terence Disdale Design ၏ အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပြီး ပိုင်ရှင်၏သီးသန့်ကုန်းပတ်သည် အရှည် 65 မီတာရှိပြီး ဧည့်သည် 56 ဦးဆံ့နိုင်ပြီး သင်္ဘောသား 36 ဦးပါရှိသည်။ ၆၆ ယောက်။ ၎င်းသည် Azzam ထက် ပို၍ ဇိမ်ခံသော သင်္ဘောဖြစ်သည်။
၎င်းတွင် ရဟတ်ယာဉ်သုံးစင်းနှင့် ပင်လယ်အလယ်တွင် အပန်းဖြေအနားယူရန် 16 မီတာရှည်သော ရေကူးကန်တစ်ခုပါရှိပြီး ၎င်းကို မည်သူမှ အသုံးမပြုသည့်အခါ မီးကောင်းကောင်းလောင်ကျွမ်းရန် နေရာပါရှိသည့် အကကြမ်းပြင်ဖြစ်လာစေရန် ဝှက်ထားသည်။ Azzam ပေါ်လာသောအခါ၊ လကြတ်ခြင်းမှာ အမှန်အတိုင်း ကြတ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုရပေမည်၊ သို့သော် ရုရှား၏လှေသည် စူပါရွက်လှေများကြားတွင် စူပါရွက်လှေဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်မှာ သေချာပါသည်။
သိသာတဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ တန်ဖိုးကြီးတဲ့ ရွက်လှေတွေ စာရင်းက ဆက်သွားနေပါတယ်။. သူတို့ရဲ့ အကောင့်ထဲမှာ ငွေအများကြီးနဲ့ ဘာလုပ်ရမှန်း မသိတဲ့ ဘီလီယံနာ အရေအတွက် များလာတဲ့အတွက် ဒီသင်္ဘောတွေအတွက် ၀ယ်လိုအားက ပိုများလာတယ်လို့ အစမှာ ပြောထားပြီးသားပါ။
နောက်ထပ်စာရင်းမှာပါတဲ့ ရွက်လှေတွေကတော့ Uzbek ဘီလီယံနာ Alisher Asmanov မှ Dilbar156 မီတာ၊ပု Mahrousa, 145.72 မီတာ, အီဂျစ်သမ္မတရွက်လှေ နှင့် XNUMX ရာစုသို့မဟုတ် Flying Fox, 136 မီတာBeyonce နဲ့ Jay Z တို့ ငှားခဲ့ဖူးတယ်။
El ဒူဘိုင်းဒူဘိုင်းရှိ Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum မှ၊ အရှည် 162 မီတာရှိသည်။အဆိုပါ Nord 2021 ခုနှစ်တွင် Lürsse မှလည်းမဲပေးခဲ့သည်။ ဗြာ 183 မီတာရှိသော်လည်း ဇိမ်ခံကားမဟုတ်သော်လည်း လေ့လာရေးခရီးသည် ဆောက်လုပ်ဆဲဖြစ်ပြီး 2024 တွင်မဲပေးမည်ဟု မျှော်လင့်ရပြီး နောက်ဆုံးတွင် ပိုလန်တွင် 910 မီတာ Y120 ကို ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေဆဲဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ယေဘုယျ » ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးရွက်လှေ